Nagu saabsan - Shenzhen Yuxingyuan Hadiyad Baako Baako Co., Ltd.
Shenzhen Yuxingyuan Gift Baako Co., Ltd. waa shirkad xirfad daabacaadda iyo baakadaha isku dhafan naqshadeynta, daabacaadda iyo dib-u-farsameynta. Ku takhasusay daabacaadda dhammaan noocyada sanaadiiqda baakadaha, sanaadiiqda midabka, sanaadiiqda kaararka, kaararka midabka, albumyada xayeysiinta, calaamadaha, buugaagta, boorsooyinka waraaqaha, istiikarada, buugaagta, istiikarka sawirka, albumsyada sawirka, sanduuqyada dahabka, sanaadiiqda dharka, sanaadiiqda hadiyadaha, iyo kuwa kale ee daabacan qalabka. Shirkaddu had iyo jeer waxay qaadataa horumarinta shirkad tiknoolajiyad casri ah daabacaadda u ah jihada horumarkeeda, la jaanqaadaysa xilliyada, waxayna la socotaa macluumaadka warshadaha daabacaadda ee hadda jira iyo isbeddellada. Waqtigaan la joogo, shirkaddu waxay leedahay madbacadaha daabacaadda leh ee afar-midab, shan-midab ah, lix-midab leh oo Heidelberg ah iyo Komori, iyo soo bandhigiddi ugu dambaysay ee daabacaadda 'KBA' ee Taiwan oo si buuxda u furan waxay si buuxda ula kulmi kartaa soosaarka noocyo kala duwan oo waaweyn, dhexdhexaad iyo yarba leh. sanduuqyada, iyo sidoo kale noocyo horumarsan oo horudhac ah, daabacaadda, iyo qalabka waxsoosaarka kadib si loo daboolo horumarka joogtada ah ee tayada iyo adeegga Sheegashada macaamiisha.
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay u hoggaansameysaa falsafadda ganacsiga ee "hal-abuurnimada, wax-ku-oolnimada, tayada, adeegga", qalabka daabacaadda ee horumarsan, heer farsamo xirfadeed, iyo dhammaystirka ka-shaqaynta hoose si loo siiyo macaamiisha wax soo saar iyo adeegyo daabacan oo tayo sare leh. Dhammaantood waa lagu soo dhaweynayaa booqashada iyo hagista! Diyaar u ah inaan kula shaqeeyo si aan u abuurno berri ka wanaagsan.
Sii wad hal-abuurnimada, horay usosoco, iskaga dhaafno nafteena, oo noqo mid weyn kana sii xoog badan. Markasta noqo mid mahadnaq ah oo fuliya waajibaadka bulshada. Ku dadaal natiijooyinka wanaagsan isla markaana soo celi macaamiisha iyo maalgashadayaasha.
Macaamiisha, waxaan udoodnaa faa iidada wadajirka ah waxaanan raadineynaa horumar guud oo iskaashi ah. Xulufada, waxaan udoodnaa tartan si kor loogu qaado iskaashiga loona dhiso fikrad guul-guul ah. Shaqaalaha, ku dhiirrigeli shaqaalaha inay si wadajir ah ula koraan shirkadda. Bulshada, u doodo wada noolaanshaha wadajirka ah ee shirkadaha iyo bulshada.
Ruuxeena Raadso isbeddel fikradaha, fikradaha cusub, tallaabooyin macquul ah, iyo turxaan bixin xagga shaqada ah. Hore ula soco waqtiyada, ka faa'iideyso fursadaha, la jaanqaad tallaabooyinka xaaladaha maxalliga ah, oo wax cusub ku beddelo while
Faham xaalada guud, fiiro gaar ah u yeelo faahfaahinta, raadso kaamil ahaanta, oo muuji heer sare.
Shenzhen Yuxingyuan Gift Packaging Co., Ltd. waxay u hogaansan tahay siyaasada "kaqeybgal buuxa, horumar joogto ah, iyo xaqiijinta balan qaad kasta oo macaamiisha", waxayna sameysay nidaam hubin tayo leh oo dhameystiran iyo adeeg adeeg qiimo leh. Si buuxda u qabso ganacsiga albumyada sawirada, bogagga midabka, joornaalada, boodhadhka, buugaagta wax soo saarka, sanduuqyada qurxinta ee wanaagsan, sanduuqyada waraaqaha wanaagsan, baakadaha midabaynta, sanduuqyada hadiyadeed ee fiican, buugaagta wanaagsan, istiikarada, istiikarka, iwm. Iyadoo la jaan qaadayo fikradda adeegga ee "daacad", "kalsooni", "xamaasad", "tayo" iyo "hufnaan", fikradda maaraynta ee raadinta heer sare, tayada ugu horreysa, oo ku saleysan aasaaska, horumarka hal-abuurka ah, ku tiirsanaanta maareynta sayniska iyo qalabka horumarsan, Teknolojiyada heer sare, sare - adeegga sinnaanta, wuxuu ku guuleystay aqoonsiga tiro badan oo macaamiil ah, wuxuu ku kasbaday sumcad suuq sare iyo kalsooni.
Shirkaddu had iyo jeer waxay aaminsan tahay in "tayada ay tahay nolosha sheyga, kalsooniduna ay tahay aasaaska shirkadda". Waxaan abuuri doonnaa muuqaal kaamil ah qanacsanaanta macaamilka ee adeegga fasalka koowaad, maareynta heerka koowaad, iyo tayada heerka koowaad, waxaanna hirgelin doonnaa wacyi-gelinta tayada ee dhammaan adeegga daabacaadda alaabooyinka, ku guuleysaneyna kalsoonida iyo taageerada macaamiisha si daacadnimo leh, iyo la abuuro berri ka wanaagsan macaamiisha. Si kal iyo laab ah u soo dhawow dadka dhammaan qaybaha nolosha inay soo booqdaan oo ay wada shaqeeyaan!